Fahatakarana ny R amin'ny CRM | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 28, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vao avy namaky lahatsoratra tsara ity aho CRM ary mieritreritra aho fa misy lavaka lehibe sy lehibe ary banga amin'ny ankamaroan'ny fampiharana CRM… ny Fifandraisana.
Inona no atao hoe fifandraisana?
fifandraisana mitaky a fifandraisana roa-lalana, zavatra izay tsy hita amin'ny CRM rehetra. Ireo CRM lehibe rehetra eny an-tsena dia manao asa mahafinaritra amin'ny fisamborana angon-drakitra - saingy tsy manao na inona na inona izy ireo mba hamenoana ilay loop. Mino aho fa izany no lakilen'ny tsy fahombiazan'ny ankamaroan'ny fampiharana CRM. Ary mino aho fa io no rohy malemy indrindra amin'ny ankamaroan'ny sehatra CRM.
Jery ​​iray amin'ny fikarohana Google an'ny Customer Relationship Management ary ho hitanao fa ny mpivarotra tsirairay dia mamaritra ny CRM hentitra amin'ny tanjaky ny rindrambaiko. Ohatra, ity Famaritana Salesforce:
Ny famaritana tsotra sy malalaka indrindra dia hita amin'ny anarana: CRM dia fomba feno hitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifanao? ao anatin'izany ny mpanjifa mety ho avy? hahasoa sy hahasoa maharitra. Ny tena manokana, ny rafitra CRM maoderina dia ahafahanao misambotra vaovao manodidina ny fifandraisan'ny mpanjifa sy mampifangaro azy amin'ny asa sy ny angon-drakitra mifandraika amin'ny mpanjifa.
Hmmm… Heveriko fa tsy kisendrasendra ny hoe ny sehatry ny Salesforce dia mifantoka tanteraka amin'ny fisamborana data ary ny any aoriana kosa dia manana fahaiza-manao matanjaka. Mbola mieritreritra aho fa antsasaky ny vahaolana CRM fotsiny.
Ny antsasaky ny vahaolana dia miankina amin'ny fifandraisanao amin'ny mpanjifanao. Ny CRM anao dia tokony hiorina amin'ny teboka mitarika hamina, araka izay azonao atao, ireo fotoana tokony hanaovanao ny fifandraisanao amin'ny mpanjifanao. Ahoana no ampandrosoanao ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny androm-piainan'ny mpanjifa?
Ohatra amin'ny fampiharana CRM mahasoa
Raha vinavina, inona ny vokatra na serivisy mahaliana azy ireo amin'ny seraserao na amin'ny tranokalanao (fampidirina analytics)? Rahoviana izy ireo no manantena ny hifandraisanao indray? Manana fanairana efa napetraka ve ianao hampandre anao hoe rahoviana ianao no hifandray amin'izy ireo na mailaka lohahevitra voalahatra?
Raha vinavina na mpanjifa izany, moa ve ny votoatin'ny tranonkalanao mikarakara ny vokatra na serivisy nomen'izy ireo liana sa nivarotra azy ireo? Heveriko fa Amazon.com miasa tsara amin'ny fanomezana boky ho ahy - saingy tsy raharahain'izy ireo ny zava-misy fa miantsena aho Barnes sy Noble, koa. Raha natambatra izy ireo Shelfari or GoodReads ao amin'ny kaontiko, ho fantatr'izy ireo izay efa novidiko ary tsy hasehony ahy intsony.
Efa nametraka lanja ho an'ny mpanjifanao azonao atao ve ianao avy eo? Raha mandany dolara an'arivony miaraka aminao aho, ahoana no itondranao ahy tsy mitovy amin'ireo olona tsy? Mandeha amina fivarotana kafe any an-toerana aho izay manintona ahy mandritra ny fotoana kely rehefa mahazo mpanelanelana amin'ny tontolo aho. Fantatr'izy ireo ny anarako ary fantany fa sarobidy amiko kokoa izy ireo noho ny mpanjifa miseho indray mandeha isam-bolana.
Fantatrao ve hoe rahoviana ny antony mahatonga ny olona hijanona na handao anao? Raha manokatra 5 ny salanisan'ny mpamaky ny mailakao, tsy manindry mihitsy, ary avy eo tsy mamono, inona no ataonao hafa amin'ny newsletter isa 5 ho an'ny mpamaky izay tsy voatsindry mihitsy?
Rahoviana no fotoana farany nisaoranao azy ireo na nangatanao ny hevitr'izy ireo momba ny serivisinao? Manana ambaratonga fandaniana na tokonam-baravarana napetraka ve ianao mba hifandraisana amin'ireo mpanjifa mandany $ X na miantsena isaky ny andro X, herinandro na volana?
Ny fandaharam-potoana, ny mailaka voafitaka, ny valisoa ary ny atiny mavitrika no zava-dehibe amin'ny ISANAO fihazonana fifandraisana amin'ny mpanjifanao sy fanampiana azy ireo mandritra ny fiainam-piainan'ny mpanjifa. Topazo maso ny fampiharana CRM anao… ahoana no anampiany anao amin'izany? Tsy tokony havela ho anao ny hampivelatra ireo fifandraisana rehetra ireo amin'ny CRM anao. Raha izany dia tsy manana rafitra CRM ianao fa manana angona data ho an'ny mpanjifa fotsiny.
Ny rafitra Analytics, Shopping Carts, Marketing amin'ny mailaka ary ny rafitra fitantanana atiny amin'ny tranokala dia tsy maintsy ampidirina ho anao hanana fampiharana CRM izay handray soa feno avy amin'ny vola lany sy ny ezaka ilaina amin'ny fananganana fampiharana CRM. Raha tsy izany ampifandraiso ireo teboka, tsy manana vahaolana CRM ianao.
NAOTY: Rehefa nikaroka loharanom-pahalalana CRM sy kisarisary tsara amin'ny Internet aho dia nahita loharano lehibe, ny Mpampianatra amin'ny marketing.
Tags: CRMfifandraisan'ny mpanjifafifandraisana amin'ny mpanjifamanaova mialohaproduct reviewsfahaiza-mitarikafifandraisanamanaiky Designfizotry ny varotraSlider
28 Jan 2008 amin'ny 7:13 PM
Heveriko fa marina fa ny ankamaroan'ny rafitra CRM dia tokony hatao hoe rafitra PRM tsara kokoa satria tsy momba ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa izany fa ny Prospect Relation Management indrindra izay tsy ahasahianay ny fifandraisan'ny olona amin'ny olona. Ny ankamaroan'ireo rafitra ireo dia novolavolaina ho an'ireo mpihaza mifanohitra amin'ireo mpanangona ary tena tsy mety mihitsy na dia tetika 'tany sy fanitarana' izay tena mitaky fananganana fifandraisana maharitra.
Ny rafitra CRM dia namboarina tamin'ny fikirakirana "mpanjifa" maro an'isa ary ny fananganana fifandraisana dia azo atao tsara raha mieritreritra ny ezaka mifantoka amin'ny mpanjifa kely izahay.
Marina ny anao ary ny antony dia tsy natsangana ireo rafitra CRM ireo noho ny tanjona ampiasana azy ireo.
Jan 29, 2008 ao amin'ny 3: 46 AM
Mety ho marina kokoa ny fiantsoanao azy ireo hoeRafitra fitantanana ny Prospect“, Na“pms”Raha fintinina. Kinda manana peratra mahatsikaiky amin'izany, tsia? '-)
Jan 29, 2008 ao amin'ny 6: 40 AM
Hoy aho fa tsy izaho. 🙂
Jan 29, 2008 ao amin'ny 3: 31 AM
Hevitra tsara. Amin'ny safidy mora dia maro ho an'ny orinasa hanombohana mifanerasera amin'ny mpanjifa amin'ny iray amin'ny sehatra iray dia tsy tokony hisy fialan-tsiny tsy hanaovana izany (facebook, bilaogy, mailaka).
Ny orinasa rehetra dia mampiasa CRM, ny fampiasana azy amin'ny fomba mandaitra kokoa dia mety ho tolo-kevitra momba ny sanda natolotry ny orinasanao, ary izany rehetra izany dia eo amin'ny toro-làlan'ny rantsan-tànanao.
29 Jan 2008 amin'ny 10:59 PM
Rehefa nibilaogy nandritra ny fotoana kelikely aho, be loatra ny mampiasa CRM 'misintona' ny vinan'izy ireo fa tsy mamorona fifandraisana amin'izy ireo.
Jan 30, 2008 ao amin'ny 10: 31 AM
Tsy tadidin'ireto manam-pahaizana CRM ireto ve hoe nanao ahoana izy ireo rehefa niaraka?
Tsy ny hevitra iray ao ambadiky ny CRM ve no manorina fifandraisana maharitra? Ka, oviana no niafara tamin'ny fiarahana ny fijanonana? Ahoana no fandraisako azy amin'ireo orinasa mampiseho ny zavatra 'fantany' momba ahy? Tena marina, veloma.
Inona ny vahaolana? Anontanio aho, ampandraiso aho, manintona ahy ary manaitaitra ahy, gaga aho ary ataovy mahatsiaro ho miavaka. Wow, sarotra izany.
Ahoana no tsy ahitan'ny orinasa azy? Matahotra ny hanontany ve izy ireo? Matahotra holavina?
Sakafo eritreretina: raha tsy liana aho, tsy aleonao ve mitady ho ela kokoa noho ny taty aoriana? Ka afaka mifantoka amin'ireo liana ianao?